खगेन्द्र लामिछानेको ‘धनपति’ को फस्टलुक रिलिज
दीपेन्द्र के. खनाल निर्देशित चलचित्र “धनपति” को फस्ट लुक रिलिज गरिएको छ । खगेन्द्र लामिछाने र सुरक्षा पन्तको मुख्य भूमिका रहेको चलचित्रको फस्टलुक निर्देशक दीपेन्द्र के. खनालले फेसबुक मार्फत सार्वजनिक गरेका हुन् । चलचित्रको फस्टलुकमा खगेन्द्रले सुरक्षालाई साइकलमा हालेर दौडाउँदै गरेको झलकमा देख्न सकिन्छ । चलचित्रका लेखक समेत स्वयम अभिनेता खगेन्द्र
केकी र नाजिरले माघे संक्रान्तिमा लगनगाँठो कस्ने
चलचित्र ‘राज्जा रानी’को प्रदर्शन मिति तय गरिएको छ । चलचित्रमा नायिका केकी अधिकारी र नायक नाजिर हुसेनलाई मुख्य भूमिकामा रहेका छन् । केकी, नाजिरसँगै चलचित्रमा कामेश्वर चौरासिया मुख्य भूमिकामा देखिनेछन् । नायिका रेखा थापाको विशेष भूमिका चलचित्रमा देखिदैछन् । चलचित्रले पश्चिम तराईस्थित सानो जनजाति समुदायको संवेदना र प्रेमकथा चित्रण गर्छ
आना र आशिरमान स्टारर ‘ग्याङ्गस्टर ब्लूज’ टिजर रिलिज…(हेर्नुस् टिजर)
हेमराज बिसी निर्देशित फिल्म ‘ग्याङ्गस्टर ब्लूज’को टिजर रिलिज भएको छ । टिजरमा डेब्यू ब्वाई आशिरमान देशराज जोशी लिड अभिनेत्री आना शर्मासँगै संयम पुरी र रोजिशा शाही ठकुरी फिचरिङमा छन् । फिल्मको नामले जस्तै टिजर पनि ग्यङ्गस्टर लाग्छ । निर्माण घोषणाको समयदेखि नै उदयिमान प्रतिभाको रुपमा अनि फिल्म उद्योगको लागी आशाको
‘जिन्दगानी तिमि’ बोलको गीतमा कोशिश र नम्रता रोमान्स
जेठ १२ गतेबाट देशभर प्रदर्शनमा आउने चलचित्र ‘पर्व’ को नयाँ गीत सार्वजनिक भएको छ । केतन क्षेत्रीको आवाजमा रहेको ‘जिन्दगानी तिमि’ बोलको गीत सार्वजनिक गरिएको हो । यस गीतमा कोशिस क्षेत्रीको शब्द र संगीत रहेको छ भने कविराज गहतराजको कोरियोग्राफी रहेको छ । सार्वजनिक गीतमा कोशिश क्षेत्री र नम्रता श्रेष्ठ रोमान्स देखिन सकिन्छ
चिना हराएको मान्छे को अर्को पुस्तक हरीबहादुर प्रकाशन…(हेर्नुस् भिडियो)
चिना हराएको मान्छे प्रकाशन गरेर लेखनमा पनि अब्बल मानिएका चर्चित हास्यकलाकार हरिवंश आचार्यले अर्को पुस्तक हरीबहादुर प्रकाशन गरेका छन् । हरीवंशकोे यो पुस्तकको विमोचन नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठानको डबलीमा शनिवार अर्का चर्चित हाँस्यकलाकार हरीबहादुरको जोडी मदनबहादुर अर्थात मदनकृष्ण श्रेष्ठले गरे । चिना हराएको मान्छे’ आत्मबृतान्तबाट लेखन यात्रामा छिरेका हरिवंश आचार्य हरिबहादुरबाट उपन्यास
सन्नी लियोनको सुटिङको गोप्य फोटो सोसल मिडियामा हिट
एजेन्सी – बलिउडकी हट नायिका सन्नी लियोनको हरेक तस्बिर चर्चाको विषय बन्ने गर्दछ । सन्नी अहिले सुटिङमा व्यस्त छिन् र उनले सुटिङको आफ्ना केही सेक्सी तस्बिर सोसल मिडियामा सेयर गरेकी छिन् । सन्नी धेरैजसो सोसल मिडियामा हट तस्बिर सार्वजनिक गरेका कारण चर्चामा रहन्छिन् । जस कारण सधै विवाद हुन्छिन ।
‘काले दाइ’ लाई १ करोड पटक भन्दा बढी हेरियो
जेठ १२ गतेबाट देशभर प्रदर्शनमा आउने चलचित्र ‘पर्व’ मा समावेश ‘काले दाई,काले दाई’ बोलको गीत युट्य्वमा १ करोड पटक हेरिएको छ । अपलोड गरिएको छोटो समय करिब ५ महिनामा यो गीतको भिडियोलाई युट्युवमा १ करोड भन्दा बढी पल्ट हेरिएको छ । कोशिस क्षेत्रीको संगीत रहेको गीतमा निश्चल बस्नेत र मिना
महानायक राजेश हमाल नेकपा एमालेका लागि सडकमा
काठमाडौं – महानायक राजेश हमाल समेत चुनावी सरगर्मीबाट चोखो रहन सकेनन् । स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिएसँगै चुनावी सरगर्मी समेत ह्वात्तै बढेको छ । सबैलाई निर्वाचनको सरगर्मीले छोएको छ । हमाल शनिवार विहान नेकपा एमालेका लागि भोट माग्न सडकमा निस्किए । राजेश हमालले प्रचार टोलीसँगै एमालेका २६ नं वडाका वडा अध्यक्ष
चलचित्र ‘बाहुबली–२’ हेर्न पूर्व राजपरिवार हलमा
भारतमा एकपछि अर्को बक्सअफिस रेकर्ड ब्रेक गर्दै सर्वकालिन कमाइ गर्ने फिल्मको रेकर्ड बनाउने दिशामा बढिरहेको ‘बाहुबली: द कन्क्लुजन’ले चौतर्फी तारिफ बटुलिरहेको छ । कटप्पाले बाहुबालीलाई किन मार्‍यो ? यो कौतुहलतालाई धेरैले ‘बाहुबली–२’ हेरेर मेटाइसकेका छन् । चलचित्रको क्रेजले नेपालको पूर्वराजपरिवारलाई समेत हलसम्म तानेको छ । शुक्रबार साँझ ५:३० बजे काठमाण्डौंको
आना र आशिरमानको ‘ग्याङस्टार ब्लुज’ टिजर सार्वजनिक
हेमराज विसी निर्देशित चलचित्र ‘ग्याङस्टार ब्लुज’ को टिजर भखरै सार्वजनिक भएको छ । टिजरमा नवनायक आशिरमान देशराज जोशीको एक्सन पक्षलाई प्रस्तुत गरिएको छ । १ मिनेट २१ सेकेण्ड लामो टिजरमा नायक संयम पुरी र नायिका रोजिशा शाही ठकुरी पनि प्रस्तुत छन् । यस चलचित्रमा सरोज न्यौपानेको निर्माण रहेको छ । चलचित्रको पुरै छायाँकन सकिएर सम्पादनको